မူးမြစ်တံတားပေါ်တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အသေအပျောက်များ » THE 74 MEDIA
Truth, Insight, Independence
Multimedia News Photos
မူးမြစ်တံတားပေါ်တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အသေအပျောက်များ
ByThe 74 Media
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ရှိ မူးမြစ်တံတားပေါ်၌ ယမန်နေ့ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ ၄ နာရီခွဲခန့်က PDF နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြား ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်မှ အသေအပျောက်များကြောင်း သိရသည်။
PDF နှင့် စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြား လေးနာရီခန့်ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်မှ ဗိုလ်ကြီးအပါအဝင် တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြား သေဆုံးခဲ့ပြီး လက်နက်အများအပြား သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ဟု ဖြစ်စဉ်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက The 74 Media ကိုပြောသည်။
“စကစတွေ အသေအပျောက်များပြီး ပြန်ဆုတ်ပြေးသွားတယ်။ ကောက်ရတာက တပ်ကြပ်အဆင့်ထိရတယ်။ ဒုတပ်ရင်းကျတယ်လို့ ကြားတယ်။ ဗိုလ်ကြီး သုံးပွင့်ကတော့ သေချာတယ်။ အလောင်းအများစုကို ပြန်သယ်သွားလို့ အတိအကျတော့မရနိုင်ဘူး။ တချို့ စကစ အလောင်းတွေကို တံတားပေါ်ကနေ ပစ်ချသွားပြီး နိုင်သလောက်သယ်သွားတယ်။” ဟုသူကပြောသည်။
စစ်ကောင်စီတပ် တပ်မ ၄၄ သည် နောင်မူးကျေးရွာမှ ဝမ်းဘဲအင်းကျေးရွာသို့လာချိန် ပင်လည်ဘူး PDF၊ ကောလင်း PDF၊ ဝန်းသို PDF တို့က စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ဝမ်းဘဲအင်းကျေးရွာနှင့် နှောင်အင်းကျေးရွာကြားရှိ မူးမြစ်တံတားပေါ်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပင်လည်ဘူးမြို့သည် ကသာခရိုင်၊ ကောလင်းနယ်အတွင်းရှိ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၏ ရုံးစိုက်ရာ ဖြစ်သည်။
မိုးညှင်းတွင် လူငယ်တစ်ဦးနှင့် မိသားစုဝင်များကို စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဖမ်းဆီး
စစ်ကောင်စီအထိနာခဲ့သည့် ပင်လည်ဘူးတွင် တိုက်လေယာဉ်ပျံဝဲ
By The 74 Media
ဗန်းမော်တွင် စစ်ကောင်စီ၏ လှည့်ကင်းယာဉ်တစ်စီးမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရ
Nov 15, 2021 The 74 Media
မင်းလုပ်လို့တိုင်းပြည်ပျက်နေပြီ (ကာတွန်း – လက်ပံတန်း)
ဖားကန့်တွင် တပ်စခန်းတစ်ခုကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ကြောင်း ကေအိုင်အိုအတည်ပြု
Nov 14, 2021 The 74 Media
စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIAက သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲပြင်းထန်
© Copyright 2021 The 74 Media. All Rights Reserved.
The 74 Media အကြောင်း